एउटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरि’त्र ह’त्या गरेर न्याय हुन्छ ? – रेखा – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/एउटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरि’त्र ह’त्या गरेर न्याय हुन्छ ? – रेखा
2,843 1 minute read
छानबिनको क्रममा रहेकी किशोरिको बारेमा अनर्गल कुरा लेख्ने छुट छ ? समुहमा बाहुन छेत्री, जनजाती जो जस्लाई गाली गर्नु छ गरे हुन्छ I एउटा केटी मान्छेको पेटिकोट समातेर बि’द्रोह हुन्छ ? दो’षी वा निर्दोषको किटान हुनु पहिले नै यसरी मानसिक हि’न्सा र प्रता’डना दिएको कारण ति किशोरि नदिमा हा’म्फलेमा कस्ले जवाफ दिन्छ ? दलितलाई प्रेम गरेको स’ट्टा जसरी उस्को चरि’त्र ह’त्या हुँदैछ, यसले जातिबादी सोचलाई झन धेरै बालवालिकामा स्थापित गर्ने देखिन्छ । राज्य सँग लडनु पर्‍यो नि, एउटा १७ बर्ष कि किशोरिलाई मानसिक र सामाजिक उत्पि’डन किन ? दो’षी भये कानुनी कार्वाही गरियोस । यो नबिर्सौ कि एउटा किशोरिको जीवन ब’र्वाद पारेर न्याय पाउने हो भने, कुनै पनि छोरीले भोली कसैलाई माया गर्ने छैनन ।